पत्रकारितामा निडर रिपोटिङ गर्ने पुडसैनीले कसैले फसाउन खोज्दैमा आत्माहत्या गर्नपर्ने जस्तो लाग्दैन
कानुनी राज्यमा कानुनको पालना गर्नु नागरिकको मात्र हैन कानुनका निर्माताहरूको पनि कर्तव्य हुन्छ। अनि कानुनले भाबुकताना हैन प्रमाणमा विश्वास गर्दछ। प्रमाणका आधारमा यदी कोही दोषी देखिन्छ भने सडकको हुलले मागे अनुसारको हैन कि त्यहि कानुनमा ब्यवस्था गरिय बनोजिमको कार्यवाही गरिनु पर्दछ ।
धेरै पूराना अपराधिक घटनाहरूको सफल अनुसन्धान गरेर अपराधिलाई कानुनको पञ्जामा पार्न सफल नेपाल प्रहरीको छवी, पछिल्लो समयका चर्चित धटनाहरूको अनुसन्धानमा देखियका त्रुटिहरूका कारण, प्रश्नहरूको घेराभन्दा बाहिर छैन । तैपनि जनतामा बिश्वास अझै जिवीत नै छ कि नेपाल प्रहरीले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न पाएको खण्डमा कोही अपराधी उम्कन या कुनै निर्दोष खोरमा जाकिन पर्ने छैन।
जिवनमा गल्ति नगर्ने मानिस पाउन संभव छ भन्ने म मान्दिन। गल्तिबाट शिक्षा लिएर, उत्पन्न परिस्थितीको सामना गरेर जिउनुको सार्थकता हुन्छ ।आफैले शृजना गरेको समस्यसँग डराएर आफ्नो जिवनको आफै संहार गर्नु केवल कायरता हो जस्तो लाग्छ ।
खोज पत्रकारितामा निडर रिपोटिङ गर्ने शालिगराम पुडसैनी जस्तो पत्रकारले कसैले फसाउन खोज्दैमा आत्माहत्या गर्नपर्ने त थियो जस्तो लाग्दैन। जसको नाम लियर मलाई फसाउन खोजियो भन्ने आरोप लगायको देखिन्छ-भिडियोमा, त्यहि भिडियोमा पुडासैनीले तिनै आरोपीले गरेका गैरकानुनी कामको प्रमाण आफूसँग भएको पनि बोलेको देखिन्छ। किन त्यो प्रमाणलाई आफूलाई फसाउने षड्यन्त्रको बिरुद्ध प्रयोग नगरेका होलान् ?
मर्नुभन्दा पहिले भिडियो बनाउँदा भित्री गन्जिमात्र लगायर बसेको मान्छे झुन्डिन जॉंदा त सर्ट पनि लगायर गएछन् ? झुन्डिएको सवको खुट्टाले खाटमा टेकेको छ, त्यो पनि घुडा खुम्चने गरी । त्यस्तो अवस्थामा मृत्यु हुन सक्ला र ? अनि लाशको जिउभरि निल-डाम किन हुनुपर्ने ? पुडासैनीले आफूले आफैंलाइ पिटी-पिटी मारे होलान त ? भिडियो हेर्दा म जस्तो सामान्य नागरिकको मनमा त यस्ता कैयौं प्रशनहरू उब्जिएका छन् भने नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृतका दिमागमा कति उब्जिएका होलान्?
यदि यो घटना संचारकर्मी रवि लामिछानेको सिधा कुराबाट आत्तिएका, देशको ढुकुटी लुटेर अनि जनताको पसिना र रगत चुसेर मात्तिएका कपुतहरूको गिरोहको षड्यन्त्र रहेन छ भने नेपाल प्रहरीले सत्य तत्थ छीट्टै बाहिर ल्याउला। हैन भने त लामो प्रयासपछि तिमीलई खोरमा पुर्याका छन् रवि के हुन्छ के हुन्न समयले देखाउला।
रक्षा बन्धनको दिन हिरासतमा पुग्यौ कानुनले तिम्रो रक्षा गरेस् ।